Idesktop yeSuperGIS, uthelekiso oluthile ...
ISuperGIS yinxalenye yemodeli yeSupergeo endithethe ngayo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngempumelelo entle kwilizwekazi laseAsia. Emva kokuyivavanya, nazi ezinye izinto endizenzileyo. Ngokubanzi, yenza malunga nayo nayiphi na enye inkqubo ekhuphisanayo. Inokuqhutywa kuphela kwiWindows, kunokwenzeka ukuba iphuhliswe kwi-C ++, ye ...
ESRI GvSIG OS KML GIS asibonise shp
Ukuphindaphindeka kwe-GIS, enye into engakumbi enezakhiwo
Ngexesha elithile eladlulayo ndathetha kwinqaku malunga nendlela yokwenza iintetho zokuprinta usebenzisa i-GIS Manifold. Ngelo xesha senza ubeko olusisiseko, kule meko ndifuna ukubonisa eyinkimbinkimbi. Lo ngumzekelo wemephu yemveliso yolimo; njengeyona mephu iphambili kukusetyenziswa okwangoku okuvela kumfanekiso ...
Inkqubo yoLwazi lweJografi isebenzisa iManfold GIS
Le yenye yezo mveliso ukuba kuyonwabisa ukukhuthaza, kwaye nomoya ababewakhelwe wona ngoku uyenziwa ufumaneke eluntwini. Incwadana yemigaqo echaza indlela yokuphumeza iNkqubo yoLwazi lweJografi kamasipala usebenzisa i-Manifold GIS. Iinguqulelo ezihleliweyo zezi mveliso ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, GIS asibonise
Inokuba yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiimveliso zenkqubo yokusebenza kwindawo yokuthetha iSpanish phantsi komxholo wejogosifisi. Ukungabinalo olu xwebhu lulwaphulo-mthetho; Masingazi ngokungazi malunga neprojekthi ngaphambi kokuyifunda kweli nqaku leGeofumadas. Kulindeleke ukuba imveliso efana ne ...
ArcView Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise QGIS
Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS
Google Earth; inkxaso yokubonwa kwabadwebi bebala
IGoogle Earth, ngaphaya kokuba sisixhobo solonwabo kuluntu ngokubanzi, ikwasisibonelelo soncedo sokubonisa kwimephu, zombini ukubonisa iziphumo nokujonga ukuba umsebenzi owenziwayo uyahambelana na; ongathethiyo njengesixhobo sokufundisa ngejografi okanye iiklasi ze-geodey. Kule meko ndi ...
Umhlaba ka-Google KML GIS asibonise
Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, Google umhlaba / imephu, GIS asibonise
Imixholo kwiminyaka emi-3 yeGeofumadas
Emva kweminyaka engaphezudlwana kwemithathu ndinebhlog, apha ndishwankathela amanani-manani endincede ukuba ndicwangcise izihloko kunye nezinto eziphambili ku-2011. Njengomgca ngokubanzi ndiphakamisile kweso sithuba ...
AutoDesk Bentley Systems Blog ESRI Umhlaba ka-Google GPS GvSIG OS GIS asibonise egeomates My QGIS
Njengoko Mapserver isebenza
Ukugqibela kwethu ukuthetha malunga nezinye iindlela zokuba kutheni iMapServer kunye neziseko zofakelo. Ngoku makhe sibone into yokusebenza kwayo ekusebenzeni kunye neemephu zabahlobo baseChiapas. Apho unganyuka khona Emva kokuba i-Apache ifakiwe, isikhombisi esipapashiweyo esisisiseko seMephuServer yifolda ye-OSGeo4W ngqo ngaphezulu kweC: / Ngaphakathi, kukho ...
Umhlaba ka-Google GIS asibonise mapserver shp
U-Alibre, eyona nto ibhetele yokuyila i-3D
I-Alibre ligama lenkampani, egama layo linemvelaphi kwigama lesiLatini elithi Liber, apho inkululeko, inkululeko, inkululeko ivela khona; Ngamafutshane imvakalelo yenkululeko. Kwaye kukuba injongo yale nkampani isekwe ekunikezeleni ngemveliso esemgangathweni ophezulu ngexabiso elothusayo. Imbali isibonisa ukuba ...
AutoDesk Dwg GIS asibonise
Ukuthatha incoko yakutshanje kunye neziko leCadastral elalikhangela ukuba lipapashe ntoni ngeemephu zalo, apha ndishwankathela ezona zinto zibalulekileyo ukubuyisela ukuhlangulwa kwesihloko kuluntu. Mhlawumbi ngelo xesha iya kunceda umntu ofuna ukwenza isigqibo okanye acele uncedo lwe-geofumado. Kutheni iMapServer imeko yayingumntu, owayene ...
cadastre, Geospatial - GIS, GIS asibonise, Microstation-Bentley, qgis
Egeomates, iifoto kuphela
Inyanga enzima ngexesha, kodwa iyanelisa ngempumelelo kunye neenkanuko zosapho nabantwana bam kunye nentombazana ekhanyisa amehlo am. Khange ndikwazi ukuthumela amaxesha ambalwa, nantsi isishwankathelo esifutshane sokufota. Inkqubo yokuqinisekiswa zizakhono. Amava anomdla kakhulu, ukucaciswa komgangatho wesatifikethi, ibhanki yento, ...
GPS GIS asibonise egeomates My
egeomates My, Uhambo
G! izixhobo, lula ukusetyenziswa Bentley Map
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndaqala uphuhliso kwiNET ebonakalayo esisiseko evela kwiMicrostation, endinethemba lokusombulula umda iBentley Imephu, kunye noMlawuli wayo weGeospatial. Ukwenza oku, ndithimbe umfundi omdala esasiqale naye ukwenza i-xfm apho xa wayephuma kwikomkhulu, ngecappuccino elungileyo kunye ne-amaretto esinayo ...
Bentley Systems Dgn ESRI Umhlaba ka-Google GIS asibonise
Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, egeomates My
Perquisites of ikhondo lam ArcGIS
Ngaphambi kokuba ndibaxelele ukuba ndiza kuphuhlisa uqeqesho ekusetyenzisweni kweArcGIS 9.3, ngomgangatho ophakathi ophakathi ngenxa yomgama, ixesha lam elincinci kunye nemisebenzi yabafundi. Ngoku ndikushiya ezinye izigqibo: Kwindlela yokusebenza: Ndinqwenela ukuba yonke into ibilula kangaka. Ukuba bekunika uqeqesho, fundisa ngomzekelo ozisiweyo ...
Dgn KML GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, GIS asibonise, Uhambo
Bentley Map, ithemba lam ngenxa Yiba Ndawonye
Ndisandula kufumana isimemo sokuba ndibekho ukuba sibe kunye, umsitho ovusa ulindelo olunomdla kum, emva kokuba kubonakala ngathi ingxaki yezoqoqosho iyahlala kwaye namathuba kufuneka avuselelwe. Okona kulungileyo Ngeengxaki zehlabathi, kunyaka ophelileyo uBentley wasungula ii-webinars zayo kwaye washiya ...
Bentley Systems Blog ESRI GIS asibonise
Baphi abasebenzisi be-GIS abaninzi?
Ngexesha elithile elidlulileyo, umphathi omkhulu wobuchwephesha waseDatshi wayedla ngokundixelela oku: “Ngokunyaniseka, ndiyamangaliswa yile nto ithethwa leli phepha liphindaphindwayo. Into eyenzekayo kukuba andikaze ndiyibone isebenza kumatshini ”Kule veki, uPatrick Webber -usuka eSpatial Knowledge- wenze intetho engenankathalo ngokuqinisekileyo esenze sangcangcazela ...
Bentley Systems ESRI GIS asibonise egeomates My
Ukuziqala iinkqubo lokuthelekisa CAD / GIS
Lo ngumsebenzi phantsi kweemeko ezifanayo, ukulinganisa ixesha elithathwayo ukuqala udweliso olunqakraza kwi icon ukuya kumzuzu eqhuba ngawo. Ngeenjongo zokuthelekisa, ndisebenzise enye eqala ngexesha elincinci, kwaye isalathiso (esirhangqwe) samaxesha ngokunxulumene noku. Andazi…
AutoDesk Bentley Systems Umhlaba ka-Google GvSIG OS GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu, GvSIG, GIS asibonise, Microstation-Bentley, qgis
Velisa imisele ne ArcGIS
Ukwenza uphando lwe-cadastral ngesikhululo esipheleleyo, ngaphandle kokuba nokuchaneka kwe-millimeter, kunokuba luncedo kwezinye iinjongo, kuba sinokuphakama kwendawo nganye. Masibone kule meko, indlela yokuvelisa imigca yentsontelo, esele siyibonile nge-AutoDesk Civil 3D, kunye neBentley Geopak kunye ne-GIS Manifold, ngolu hlobo ...
AutoDesk Bentley Systems Dgn GPS GIS asibonise
ArcGIS-ESRI, cadastre, Okufumaneka, GPS / Izixhobo, Topography
namaqonga CAD / GIS kufuneka aye GPU
Abo kuthi bangabasebenzisi bezicelo zemizobo bahlala belindele ukuba iikhompyuter zinememori yokusebenza eyaneleyo. Kule nto, iinkqubo ze-CAD / GIS zihlala zibuzwa okanye zilinganiswa ngokusekwe kwixesha elithathwayo ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla enje: Uhlalutyo lomhlaba Ukulungiswa kunye nokubhaliswa kwemifanekiso.
ezintsha, egeomates My
Ukuza kuthi ga ngoku yenye yezona zibalaseleyo (ukuba ayingoyena ulungileyo) ababukeli beenkcukacha ze-CAD / GIS endikhe ndabona, simahla kwaye sisebenza. UTatuk ngumgca weemveliso ezazalelwa ePoland, kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo ingxelo yesi-2 ye-tatukGIS Viewer yabhengezwa. Abanye ababukeli Ukuba siyazixabisa iinkqubo zasimahla zezinye iimveliso, ...
Acer balangazelela ArcView Bentley Systems Dgn Dwg ESRI Umhlaba ka-Google KML GIS asibonise umbono yam yokuqala shp
Geospatial - GIS, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 9 kwiphepha elilandelayo
Ikhosi yokuModareyitha yenyani- i-AutoDesk Recap kunye ne-Persp3D
Yenza imodeli yedijithali kwimifanekiso, ngesoftware yasimahla kwaye ngoRapre Kule khosi uya kufunda ukwenza e ...